လူချစ်လူခင် ပေါလာအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ? - Myanmarload
လူချစ်လူခင် ပေါလာအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ?
လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ် က 17:29 June 28, 2017
လူချစ်လူခင် ပေါတယ်ဆိုတာက လူမုန်းများတာထက် အများကြီး ပိုကောင်းပါတယ်။ အသက်ရှင် နေထိုင်ရတာလည်း ပိုပြီး ပျော်စရာကောင်းပြီး အဓိပ္ပါယ်ရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ရှောင်ရန်/ ဆောင်ရန်လေးတွေသာ သိထားမယ်ဆို သင့်အတွက် အကျိုးရှိမှာပါ။
၁) ပြောတာထက် များများနားထောင်ပေးပါ။
လူအများစုက ကိုယ်ပဲ ပြောချင်ပြီး နားထောင်ဖို့ကို သတိလက်လွတ်ဖြစ်နေကြပါတယ်။ ကိုယ်ချည်းပဲ ပြောနေတာထက် သူပြောတာကိုလည်း နားထောင်ပေးလိုက်ရင် သူတိို့ ကျေနပ်ကြမှာပါ။ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကို်ယ်က နားထောင်သူကောင်း တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီအချက်က လွယ်ကူလွန်းပြီး သိပ်ကို ထိရောက်ပါတယ်။ နားထောင်တဲ့အခါမှာတော့ စိတ်ရင်းအမှန်လေးနဲ့ နားထောင်ပေးပြီး လိုအပ်ရင် ကောင်းမွန်တဲ့ အကြံလေးတွေ ပေးလိုက်ပါ။ သူတို့ သင့်ကို အမြဲ အမှတ်ရနေမှာပါ။
၂) အခွင့်အရေးကြုံတိုင်း လက်ဆောင်ငယ်လေးတွေ ပေးပါ။
လူတိုင်းနီးပါး အချစ်ခံရတာကို ကြိုက်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကို ဂရုစိုက်တာကို ကျေနပ်ကြပါတယ်။ အဲ့လိုပါပဲ ကိုယ်ကလည်း ဂရုစိုက်ပေးလိုက်ပါ။ ဥပမာ - လမ်းကြုံလို့ မုန့်ဝယ်လာတာမျိုး၊ ခရီးကအပြန် အမှတ်တရ လက်ဆောင်လေးတွေ ဝယ်လာတာမျိုး၊ မွေးနေ့ဖြစ်ဖြစ်/ ဂုဏ်ပြုပွဲဖြစ်ဖြစ် အထိမ်းအမှတ်နေ့မျိုးမှာ လက်ဆောင်ပေးတာမျိုး .. စသည်ဖြင့်ပေါ့။ တန်ဖိုးက အဓိက မဟုတ်ပေမဲ့ သူတို့ကို စိတ်ထဲမှာ ရှိနေမှန်း သိရင်တော့ ပျော်ရွှင်ကြမှာပဲလေ။
၃) မိမိကိုယ်ကို လေးစားပါ။ တစ်ဖက်သားကိုလည်း တန်ဖိုးထားပါ။
မိမိကိုယ်ကို လေးစားခြင်းဖြင့် ယုံကြည်မှုကို တည်ဆောက်ပါ။ သပ်သပ်ရပ်ရပ် ဝတ်စားဆင်ယဉ်ပါ။ ကျန်းမာရေးကောင်းအောင် နေထိုင်ပါ။ ဒီအချက်က ကိုယ့်အတွက်လည်း အကျိုးရှိသလို ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်နေရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်း စိတ်ချမ်းသာမှာပါ။
အခြားသူများကိုလည်း တန်ဖိုးထားတတ်တာ ဂုဏ်ယူစရာ ကောင်းပါတယ်။ ရာထူး၊ ငွေကြေး၊ မိသားစု အသိုင်းအဝိုင်း စသည်တို့အပေါ် မမူတည်ဘဲ အားလုံးကို တန်ဖိုးထား ဆက်ဆံခြင်းသည် မင်္ဂလာ တစ်ပါးပါ။
တစ်ဖက်သားက စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်၊ စိတ်တိုနေတဲ့အခါဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်က အားပေးနှစ်သိမ့်ပါ။ နားလည်ပေးပါ။ သူ့ကို အပြစ်မပြောဘဲ ငါလည်း သူ့လို ဖြစ်နိုင်တာပဲလို့ ကိုယ်ချင်းစာပေးပါ။ ကိုယ်ချင်းစာတရားကလည်း ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အရမ်း အရေးကြီးပါတယ်။
ခိုင်းနှိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ပျားရည်ကဲ့သို့ ကျင့်ကြံနေထိုင်ပါတဲ့။ ပျားရည်က ဘယ်ခွက်ထဲထည့်ထည့် အရသာက မပြောင်းပါဘူး။ အဲ့လိုပါပဲ မိမိ၏ ကိုယ့်ကျင့်တရားကလည်း ဘယ်နေရာရောက်ရောက် မပြောင်းသွားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့ သူက ရန်သူမို့ သူဘာလုပ်လုပ် မှားနေတယ်လို့ မတွေးမိပါစေနဲ့။
၆) ကတိ မပျက်ပါစေနဲ့။
ဒါကတော့ အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့ ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ ကတိတည်ဖို့ကလည်း အင်မတန် ခက်ခဲပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် လွယ်လွယ်နဲ့ ကတိမပေးရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ ကတိပေးပြီးရင်လည်း တည်ဖိုု့ အရေးကြီးပါတယ်။ လာမယ်ပြောထားပြီး မလာတာမျိုး၊ ပေးမယ်ပြောပြီး မပေးတာမျိုး က တစ်ဖက်သားကို စိတ် အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေပါတယ်။ အကြောင်းအရင်း ခိုင်ခိုင်လုံလုံနဲ့ ပြန်တောင်းပန်ဖို့လည်း မမေ့ပါနဲ့နော် .. ကတိပျက်သွားရင်ပေါ့
အားလုံးပဲ ဒီအချက်လေးတွေကို သိထားရင်း ချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ နေထိုင်သွားကြရအောင် ..